Ngosuku lomshado - lena esibaluleke kakhulu laba abashadayo. Ngamunye ivame ukuba baphathe ngokusebenzisa ukuphila emkhathini lokhu iholide eside ngangokunokwenzeka. isifiso semvelo ukwenza into enkulu, kuyaheha futhi eyinkimbinkimbi ukuwugcina ngokuphelele, okuyinto ukugubha ukuziphatha eliqoshiwe. Honeymooners okuthiwa yi- "umbhangqwana amnandi" ubafisele eziningi zikhathi 'emtoti' empilweni ndawonye, ngakho celebration isitayela "Chocolate Wedding" ikhula kwayo.
Bamba usuku lomshado esimweni okungavamile, lapho ngisho imishado igama is eligcwele romanticism futhi okwakhe, iphupho abaningi abasanda kushada. Abahlukahlukene ushokoledi shades sihle lihambisana izimbali eziningi. Inikeza amathuba unlimited umklamo egumbini.
Chocolate lomshado. Ukuhlobisa ehholo wedding izinto zobungoma
Ungakwazi kusimangaze izivakashi zakho nge isimemo sokuqala kulowo mkhosi. Advance kufanele ucabange ukuthi isimemo lomshado noma isampula ejwayelekile wenza oda kashokholethi. Uma inyatheliswe isimemo amakhadi ukuyiprinta kayimangazi ke omnikeza izivakashi ushokoledi, osesembozweni okungase izithombe abasha nolwazi mayelana nesikhathi nendawo yalo mkhosi esiyokhunjulwa iminyaka eminingi ezayo. Kule ndaba, indiza umcabango alinaso imingcele.
Leli hholo lihlotshiswe ku isitayela 'Chocolate Wedding ", ukushiya izivakashi abancane kwakuhlala isikhathi eside. Phela, isihloko zikhale ngobumnene, ungaphambuki kuwo wonke amagumbi ihholo efektri confectionery.
Chocolate Fountain ngeke ukuhlobisa walo mkhosi. Kuyoba kokubili uswidi ngenxa izinyo elimnandi, futhi twist ezengeziwe, okuzokwenza ukugcizelela isitayela "chocolate lomshado." Jet elicibilikile awukudla uyojabulisa bonke abamenyiwe. Emhlabeni umthombo ngokuvamile izithelo ezihlukahlukene fresh futhi omisiwe, bhisikidi, okuyinto ukukuxoxela izivakashi bacwilisa nabo ushokoledi. It kungenziwa yayala bonke bathanda: kusukela omnyama umbala shades.
Wedding ikhekhe, ngaphandle kwalokho kakho izindleko, awukho umshado Ungashintshanisa umthombo. Ikakhulukazi uma olufana isitayela "chocolate lomshado". Uneminyaka emingaki is ikhekhe elikhulu kuyinto ihlupha futhi umhlobiso ithebula lomshado? Lo mbuzo kunzima ukuphendula, kubonakala sengathi kuye kwaba njalo.
Ezokuzijabulisa zithole okwakhe
Into elula ungacabanga, uma une lomshado ushokoledi - kungcono ezihlukahlukene zokuqala izipho ezincane ezenziwe ushokoledi futhi ezihlotshiswe kahle. Ziyakwazi izivakashi ikakhulukazi asebenzayo ngubani iqhaza imidlalo kanye nemincintiswano.
Kodwa uma isifiso Ngamangala futhi sithokozise izivakashi zakho aligcini nje ukukhetha elingavamile isitayela ukugubha, ungakwazi ukumema iqembu lochwepheshe. fun Original ukuthi Iyokhunjulwa phakade, uzobe ukuhlela isigaba master ekudaleni ushokoledi. Izivakashi uzobe bajabula ngokukhululwa ithuba lokwenza ezihlukahlukene zabo siqu amaswidi ezenziwe ushokoledi. Ngezikhathi ezinjalo, kunzima ukunquma ukuthi ubani ohilelekile nge-fuse enkulu ekuzijabuliseni: abadala noma izingane.
Green tea eCeylon - esezingeni umkhiqizo
Thanda anyanisi kakhulu esihlwabusayo pickled for izoso?
Butterfly timphahla tekubhukusha amantombazane ngezandla zabo ukwenza akunzima!